Mpịpụta nke Onwe-Ntinye Pumps Pụrụ Iche Nrụpụta na Suppliers - Ụlọ ọrụ China - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd
Home > Ngwaahịa > Mpempe akwụkwọ ntanetị nke onwe-akpaaka
· Pump Preds
· Pump Elu
· Ọkpụkpụ Mkpuchi
· Ngwa na-apụta
Pump Frequency Frequency Frequency Pump Pump
Mmiri Mmiri Na-enye Ọkụ Maka Mmiri Dị Mma
Mpempe akwụkwọ ntanetị nke onwe-akpaaka
Pọkụkụ Multi-Stage Centrifugal Pumps
Ndị na-esonụ bụ maka Mpempe akwụkwọ ntanetịime onwe onye gbasara PW-Z, enwere m olileanya inyere gị aka ịmatakwu nfuli nkwụsị na ntinye aka.
Zitere anyị email Zipu ozi
Isi ruo 50 m
Ọ na-agbago ruo 3,4m3/ h
A-Ž Suction elu ruo 8 m
a-Ž Max. arụ ọrụ mgbali 5 mmanya
A-Li Liquid okpomọkụ ruo 90 + ƒ
a-Ž Ambient okpomọkụ ruo 40 + ƒ
Onu ogugu nke Vol-a na-agagh agafe 10% nke oke onu ogugu
A-Ž Kwesịrị iji mmiri dị ọcha nke na-enweghị ihe abrasive ma ọ bụ mmiri yiri mmiri nke mmiri mmiri.
A-U Na-ejikarị mmiri ụlọ, ikpo ọkụ akpaka, ụlọ mmiri na-ebuli, mmiri na-ebuli elu, mmiri ọkụ na-agbanye ọkụ.
a-Ž Compact design, ngwa ntinye
A-Ž Nrụgide na igba mgbagharị na-akpaghị aka
A-Ž Pump body insert of raw sheet 304
A-Ž Shaft ndọtị bụ igwe anaghị agba nchara 304
A-Ž Ihe na-eme ka ọla kọpa rụọ ọrụ
A-Ž High quality mechanical seal
Ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa mmiri na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ. Site na mmiri na eru mmiri na nchịkọta nke mgbaba na mgbagha mgbagharị, igwe eletrik na-achịkwa mgbapụta na-agba / kwụsị, dozie nsogbu ndị na-amalite ugboro ugboro n'okpuru mmiri na-erughị ala, ma kwụsịchaa mgbe ọ bụla mmiri na-eru ala karịa 0,3m3/ h.
Oge mbido Oge-amalite: 3-sekọnd oge na mmalite iji gbochie elu eletrik
A-Ž Na-agba ọsọ: Kpochie windo ma ọ bụrụ na mmiri anaghị agafe mmiri mgbapụta mgbe ọ gbasịrị 6 nkeji, mgbe mmiri na-agafe na ntinye mmiri mgbapụta, gbanyeghachi redio.
A-Ž Ngwuputa usoro: Pump ga-agba ọsọ na-agba ọsọ ọsọ 10 sekọndị maka mgbochi ọ bụla n'ime ụbọchị 3 n'etiti oge nsị.
a-Ž Igwekorị Electronic: Ndụ ogologo ọrụ, ma wepụ ihe & nbsp; mkpọtụ kpatara site na mgbanaka ngbanwe
a-Ž Pump ahụ esịtidem enamel nhazi
Igwe igwe na-arụ ọrụ n'otu ebe, wiwi ọla kọpa, onye na-echekwa ihe nchebe na-acha ọkụ, nke a na-agbanye mpempe mmiri
Ọrụ Ị na-aga n'ihu S1
A-Ž IPX4 klas nchedo
A-Ž Class B nkuchi
Nhọrọ dị na arịrịọ
(* Nhazi nhazi na Page 15)
a-Ž NSK agba
A-Ž Class F nkuchi
Rịba ama: Ugo ogologo oge nke otu nkwụsị nke otu oge bụ 1.3m, European plug.
Ngwa ihe dị iche iche
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Mpempe akwụkwọ na-emepụta nkwụsị na nkwụnye onwe ya, Nchọpụta onwe-Priming Pumps pumping, Automatic Self-Priming Peripheral Pumps supplier, Automatic Self-Priming Pumps for sale, China Autometric Self-Priming Pumps Pumps, Automatic Self-Priming Peripheral Pumps companies, best Automatic Ngwukpo nke ntanetị onwe onye, ​​Onwe-ntinye aka na nkwụsị na nkwụnye ego, ịzụta nkwụsị nke nkwụsị nke onwe-aka.
Pumps ọfụfụ € "QB
Pumps ọfụma na-eme onwe ya ka ọ bụrụ "WZB
Multistage Submersible Pumpsâ € "QY